Dhulka danta guud,iyo guryaha danta guud Ma dii,waan gashan yihiin. - Haldoor News | Haldoor News
Dhulka danta guud,iyo guryaha danta guud Ma dii,waan gashan yihiin.
Tan iyo intii aynu ka soo faro xalanay halgankii xalaasha ahaa ee aynu iskaga tuurnay heeryadii gumaystaha ee nidaamjkii kacaanka ee kaligii taliska ahaa,
Halgankaasi oo aynu ku waynay naf iyo maal intaba, waxa ilaahay mahdii ah inagoo gacanta ku dhignay dalkeenii hooyo, markii aynu ka guulaysanay gumaystihii waxaynu u soo galay dal bur bursan oo dhulka la la simay isla markaana ay baa,ba,een kaabayaashii dhaqaale dhisme iyo hoy intaba.
Intaasi oo dhan inaga oo u soo marnay xorayntii iyo xalaalaynti dalkeena hooyo, waa mahad alle.
1.Xasuusta kamay bixin, oo waa xasuusanaa hooyadii afarta inan lahayd ee afartiiba ku wayday halgankii dib u xorayntta dalka, maantana hoos hadhsanaysa calankeeda uu ku xardhan yahay towxiidka alle swc.
2.Xasuusta kamay bin, oo waa xasuusanaa mujaahidiintii ku naf waa,yay kuna dhaawacmay halgankii xalaasha ahaa si aynu u hantino dalkeena hooyo.
3.Xasuusta kamay bixin oo waa xasuusanaa mujaahidiintii ku dhaawacmay ilaa hadana qaarkood ay wali faliidhadii ku jiraan kuna farxsan dalkooda hooyo.
4.Xasuusta kamay bixin oo waa xauusanaa mujaahidiintii hogaaminayay halganka ee magca lahaa isla markaana ku naf waa,yay , maantana inaga hooseeya.
5.Xasuusta kamay bixin oo waa xasuusanaa, in qoys iyaga oo nabad ku waabariistay masiibo ku gabal dhacsaday,iyagoo madfac ku habsaday dhamaantood,goobtaana ku wada gudh baxay.
6.Xasuusta kamay bixi oo waa xasuusanaa, aamus oo ha hadlin, iyo odayaal iyo wax garad aqoonyahan, inta habeen lala baxo, cidina aanay dib isu waydiin meel ay jaan iyo cidhib dhigeen.
7.Xasuusta kamay bixin, oo waa xasuusanaa markay mujaahidiinteenu ku dhawaaqi jireen (hub ma haystee tolaay dhagaxow,hub ma haystee tolaaya dacareey).
Intaasi aan uga gudbo xasuusin kooban inkastoo meelo badan aanan taaban intaasi waa tusaale yar oo kaliya,
Dalkii markaynu qabsanay waxa aynu ku hantinay (hanti dan guud ) oo kala ah guryo,warshado,dhul banaan iyo agab kale .
Dhamaan hantidaasi waxay dhex u ahaayeen muwaadiniinta Somaliland gobol kasta oo ay joogaan, waxaynu maqalaa ninkii hebel ayaa guri dirqi lagaga saaray iyo fulaan ayaa guri dan guud ah iibiyay, is karaab meel yaalay ayaa la xaraashay si hoose.
Intaasi arin ee aan kor ku soo sheegay waa aynu ka wada dharagsan nahay xaaladaha ka dhaca marka lagu murmo haday ahaan lahayd dhimasho, dhaawac, xadhig iyo waliba is haaraamid laysu mariyo war baahinta.
Sida aynu la soconana hantida danta guud waxaa masuul uga ah shacabka waa dowlada markaasi xilka haysa.
Gaar ahaan wasaarada howlaha guud iyo guryaynta , haday ahaan lahayd diiwaan galinteeda, iibinteeda si xalaali ku jirto sharcigana waafaqsan.
Waxaa markaa dowlada u banaan in, waa hadii ay dowladu ka maarmi waydee , in ay mariso hayada qandaraas yada laguna qoraa ja,raaidka iyo warbaahinta kale si loogu tartamo, lugna xaraashaa qiimo u dhigma shaygaa la baahiyay si xalaal ah.
Balse yaanu xaalku noqon dowladuu taageeraa waa in guri la siiyaa, magac ayuu leeyahay ee waa in dhul la siiyaa.
Hadaba dowlada waxaa looga fadhiyaa in dadkeeda ay far waa,wayn ugu dhigto uguna qorto hantida danta guud meel kastoy taalo, maaha caasimada oo kaliya, looguna dhajiyaa boodhadh waa,wayn haday tahay guri, dhul,warshad, iyo agabka kale ee danta guud ah ee dadka ka dhexeeya.
Waxa iyana iska caado ah oo dhacda in marka uu maa,mul xilka dhamaysanayo, in uu hoosta ka iibiyo dhul,guri, ama warshad intaba oo ah hanti dad wayne oo aan soo marin hayadihii shacriga u lahaa sida gudida qandaraasyada , waa xaalada la yidhaah (ka gaadh sii).
Balse waxaan dhawaan war baahinta ka maqalnay in madaxwaynaha jamuuriyada Somaliland alle ah xafidee uu ku dhawaaqay (gudidii dib u habaynta dhulka).
Hadaba walaal mudaadin hadii aad ku jirto hanti dan guud ma kuu xalaalbaa,hadaad dhimato ma lagugu maydhi karaa?
Sidoo kale muwaadin awood ma u leenahay hanti ddan guud ahayd oo aad sii hadhsanaysay in gabi ahaanba aad xaraashto?.
Gunta iyo gababada maqaalkan aan bud dhig uga dhigo walaal ama muwaadin(dhulka ilaahay baa leh), inta aynu ka dhisan mooyee, isla markaama maalinta aynu dhimano waxa aynu ku leenahay 2 mitir oo kaliya.
Hadaba shacabiyow ilaasho dalkaaga, kuna ilaasho cadaalad, iyo sinaan, hadii alle nafta inaga simo.
Waa qalinkii(m/faysal jamac xasan) Dammam Saudi Arabia (tellphone 00966540095481) email: jamac_351@hotmail.com………………………..